Iindaba -Izibonelelo kunye nokusetyenziswa kweemveliso zentsimbi
Izinto eziluncedo kunye nokusetyenziswa kwemveliso yentsimbi yokunyibilikisa isinyithi
Isinyithi sesinyithi yinkqubo yokwenza isinyithi okanye umgubo wesinyithi (okanye umxube we powder yentsimbi kunye nomgubo ongesosinyithi) njengezinto ezingavuthiyo, ngokwenza nokwakha, ukwenza izinto zesinyithi, ukudityaniswa kunye neendidi ezahlukeneyo zeemveliso.
Izinto eziluncedo umgubo yokunyibilikisa isinyithi:
1. Powder yokunyibilikisa isinyithi kunganciphisa ulwahlulo lwamacandelo e-alloy kwaye kuphelise ubukhulu, isakhiwo esingafaniyo sokuphosa.
2. Inokuqonda ngokulula iintlobo ezininzi zezinto ezidityanisiweyo kwaye inike umdlalo opheleleyo kwiimpawu ezahlukeneyo zecandelo ngalinye. Yinkqubo yetekhnoloji enexabiso eliphantsi yokuvelisa isiseko esenziwe ngentsimbi ephezulu kunye nokudityaniswa kweceramic.
3. Imveliso ekufuphi yokwenza ngobuninzi kunye nokuzenzekelayo inokufezekiswa, ngaloo ndlela kuncitshiswe ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwezixhobo kunye namandla kwimveliso.
4. Ingasebenzisa ngokupheleleyo i-ore, i-tailings, i-sludge yentsimbi, izikali zentsimbi eqengqelekayo kunye nokurisayikilisha kwezinto ezilahliweyo njengezinto ezingafunekiyo. Itekhnoloji entsha enokuthi isebenze ngokukuko kohlaziyo lwezixhobo kunye nokusetyenziswa okubanzi.
5. Inokuvelisa izinto kunye neemveliso ezinesakhiwo esikhethekileyo kunye neepropathi ezingenakuveliswa yindlela eqhelekileyo yokunyibilika.
Iimveliso Powder yokunyibilikisa isinyithi zisetyenziswa kakhulu, ukusuka koomatshini abaqhelekileyo bokuvelisa ukuya kwezixhobo ezichanekileyo; Ukusuka kwizixhobo zehardware ukuya koomatshini abakhulu abenziwe ngesamente bekhabhayithi bokwakha oomatshini; Ukusuka kwishishini le-elektroniki ukuya kwimveliso yeemoto; Ukusuka kwishishini likarhulumente ukuya kwimveliso yezomkhosi; Ukusuka kwitekhnoloji ngokubanzi ukuya kubuchwephesha obuphambili, umgubo wokunyibilikisa umgubo Inkqubo inokubonwa.
Oku kungentla malunga neempawu ezinxulumene noko kunye nokusetyenziswa kweemveliso zentsimbi yokunyibilikisa isinyithi, ndiyathemba ukuba olu lwazi lunokukunceda ukuba uqonde iimveliso zesinyithi somgubo.